Trafikana andramena - sambo “Lumina” : Voarohirohy 13 nidoboka eny Tsiafahy -
AccueilRaharaham-pirenenaTrafikana andramena – sambo “Lumina” : Voarohirohy 13 nidoboka eny Tsiafahy
Nanomboka tamin’ny 3 ora tolakandro ny fihainoana an’ireo olona miisa 14 voarohirohy tamin’ny raharaha fanondranana antsokosoko andramena, tratra tany Cap Masoala ny 07 Febroary 2017 teo. Tsy nijanona izany fakana am-bavany izany raha tsy tamin’ny 7 ora hariva. Nohenoina tsirairay tao amin’ny Fampanoavana, tetsy amin’ny Tribonaly Anosy izy ireo. Ny folo mirahalahy tamin’ireo dia ekipazy. Ny iray hafa kosa dia irakiraka ao amin’ilay sambo. Ny lehilahy iray hafa dia mpiasan’ilay tompon’ny hazo. Ny roa farany kosa dia mpivady, tompon’ny sambo “ Lumina”.
Firaisana tsikombakomba tamin’ny fanondranana andramena antsokosoko no loham-piampangana nitambaran’izy ireo. Nanamafy ny fiampangana azy koa ny fahatrarana ambody omby. Teny am-panondranana an’ireo andramena mihitsy mantsy no tra-tehaky ny vondron-kery manokana avy amin’ny Prezidansa sy ny Primatiora izy ireo, ny tolakandron’ny 07 Febroary 2017. Nanararaotra ny fanamarihana ny datin’ny 07 Febroary taty an-drenivohitra izy ireo ka nokendrena ho amin’io andro io mihitsy no nikasana hanaovana an’ilay trafika. Novakiana tamin’izy ireo ny antontan-taratasin’ny fiampangana azy. Voarakitra tamin’izany fa sambo nitondra sira 360 taonina io sambo “Lumina” io. Niainga tany Antsiranana ary nampidinin’izy ireo tao Vohémar ny 325 taonina an’ilay sira. Nanao fampilazana fiaingana na “bon de partance” ho any Mahajanga ilay sambo avy eo kanefa nivily lalana nankany Mananara ary nihazo ny Cap Masoala avy eo. Teo no nanomboka ny fitaterana an’ireo hazo sarobidy ireo.
Voaresaka tao amin’ny dosie mirakitra ny fiampangana azy ireo koa ny tsy faneken’izy ireo hijanona sy ny tsy fandraisan’ilay kaomandin’ny Sambo “Lumina” ny antso an-tariby avy amin’ny sambo nitondra ny vondron-kery manokana. Nataon’izy ireo “commande automatique” mantsy ilay sambo “Lumina” rehefa fantany fa misy manam-pahefana manenjika sy hisava azy. Voatery nanapoaka basy mihitsy moa ny avy amin’ny vondron-kery manokana nialohan’ny nahatrarana ambody omby an’ireto mpanao trafikana andramena ireto. Taorian’ny fihainoana an’ireto voarohirohy ireto moa dia notanana am-ponja vonjimaika eny Tsiafahy ny 13 avy amin’izy ireo. Ilay vehivavy kosa notanana eny Antanimora miandry ny fotoam-pitsarana azy.
Hanao ahoana kosa ny momba ny tompon’ny hazo ? Raha ny tokony ho izy dia tsy afa-bela izy amin’ny maha tompona hazo azy. Mbola hita mifamezivezy eto an-dRenivohitra kosa io ramatoa tompon’ny hazo sarobidy io tato ho ato.